Hevitra MPANOHARIANA | Septambra 2010 |
Aza manaraka ny hadalany
2010-09-28 @ 10:01 in Politika
Miala tsiny indrindra aho raha mety ho maro ny ho tafintohina amin'izay soratako etoana. Saingy ny volana imaso manko tsy mba kilema. Hanohintohina izay mety handrandrain'ny sasany manko aho ary torohevitra ny ahy fa tsy afaka hihambo aho fa izaho irery no manana ny marina. Saiky tsy hanoratra azy ity aho nefa tery indray tsy hidiran'ny sasany amin'ny fahadisoana paikady. Jereo fa tsy niresaka fihaonam-bem-pirenena mihitsy aho nandritra ireo lahatsoratra faramparany afa-tsy tamin'ny fehezanteny tokana angaha. Tsy nanome hasiny an'iny manko ny tena ka ninia tsy niresaka.
Nahavita ny fihaonambem-pireneny ny mpanohana ny fitondrana amin'izao fotoana izao, ary ratsy dia ratsy ny fiantraikan'ny fanatanterahana iny fihaonana nataon-dry zareo teny Ivato iny eo imason'ny saramambem-bahoaka indrindra fa tamin'ireo mpanohana ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Misimisy ihany moa ny olona fantatro amin'izany ary tsy very teo imasoko ny tsipalotro tamin'ny fihetsik'izy ireo hamantarana izay any an-tsainy any. Raha fehezina dia niteraka fahafaham-baraka tamin'ny safidiny sy ny fironany ny fizotry ny fihaonana ka tsy te-hiherika sy hanaraka ny vaovao ry zareo na dia nalefa mivantana tamin'ny fahitalavi-pirenena aza ny teny noho ny rikoriko tany anatin-dry zareo. Tsy te-hiresaka momba iny mihitsy koa ry zareo satria hivadika any amin'ilay fitadiavam-bola sainina ho mihoam-pampana avy hatrany ny dinika ka tsy hanan-kalahatra ankoatra ny hoe vola no tena tadiavin'izay nandeha tamin'iny. Izany hoe raha fehezina dia nampihena be dia be ny fitokisan'ireo mpanohana azy ny nanatontosana iny nolazainy fa fihaonambem-pirenena iny.
Dia manoratra aho ankehitriny ho an'ireo tsy nandray anjara tamin'iny tsy hanala-bara-tena hanatontosa izany antsoina hoe fihaonambem-pirenena hafa nefa tsy ho ekena ankolafy manana ny toerany hatrany aloha amin'izao fotoana anoratana izao noho ny hery any aminy hatreto. Marina tokoa ny filazan'iretsy efa nanala-bara-tena voalohany fa fampisaraham-bazana bebe kokoa ny mbola misisika ho amin'izany fihaonambem-pirenena hafa izany. Tsy famahana olana velively fa ho valifingika fingaka fotsiny ary mampidina ny sanda izay efa mety hampitodika ny hafa ho any aminao indray. Efa malaza indray manko fa maro tamin'ireo efa nandray anjara ny tamin'ny volana septambra no mitady ny toerana isoratana anarana amin'ilay kasaina hotontosaina ho amin'ny volana oktobra, hangatahana vola ihany koa mandritra ny fihaonana; sahala amin'ireny hoe hokaramaina ireny no hahatongavany ao fa tsy raharahany izay hevitra tapaka mivoaka avy ao. Hita rahateo fa nivadika ho fiadian-tseza ny niafaran'ny raharaha voalohany sy finiavana te-handokandoka ny mpitondra mba hampibolisatra azy.
Tsy voatery hitsipaka avy hatrany ny hisiana fihaonambem-pirenena aho fa tsy mbola mety mihitsy aloha ny hanatontosa azy amin'izao fotoana izao. Tsy mipetraka ny fepetra hahatomombana azy dia ny fiarahan'ny rehetra miara-mandinika tsy misy hafetsifetsena. Raha tsy mbola misy ny fahavononana tena hidinika dia hikatso eto hatrany isika. Fanalavirana ny fitadiavam-bahaolana tsy misy raorao efa ambivitra dia ambivitra amin'izao fotoana izao.
Jentilisa, 28 septambra 2010 mitataovovonana.